Ururka Daalibaan iyo dhinacyada siyaasadda iyo bulshada Afgaanistaan oo kulmaya – Radio Daljir
Luulyo 7, 2019 8:02 b 0
Siyaasiyiinta Afgaanistaan, ururada bulshada rayidka iyo saxafiyiin ayaa wakiilo kasocda ururka Daalibaan kula kulmaya magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar, kaasi oo qayb ka ah shirmadaxeedka Afgaanistaan iyo ururka Taalibaan oo lagu soo afjarayo dagaalka mudada dheer kasocda dalkaasi.
Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maalgelinaya wada hadalkan oo loogu talagalay inuu socdo muddo laba maalmood ah, waxaana la filayaa inay kasoo qaybgalaan erhooyin ka badan konton qof oo darajadoodu saraysa oo ka socda Afgaanistaan.
“Kulankan ayaa loola jeedaa sidii loo riixi lahaa wada xaajoodyada nabadda ee gudaha Afgaanistaan” ayuu yiri ergaygii hore ee Afgaanistaan ee Pakistaan oo isagu ka mid ah dhinacyada ka qaybgalaya shirkan.
Zakhilwal ayaa sheegay inuu dhamaystir u noqonayo shirkan wada hadalka Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ee lagu qabtay magaalada Dooxa.
Daalibaan oo horay u diiday inay kulan la yeelato dowladda reer galbeedku taageero ee madaxwayne Ashraf Gaani ayaa markii dambe ogolaatay wadahadalkan.
Iiraan oo bilowday inay kordhiso bacriminta Nuclearka ee dalkeeda